Cannabis Guri Guri Hantiyeed Magaalada Peoria, Illinois | Thomas Howard
Ganacsiga xashiishadda ayaa ku soo badanayay magaalada Illinois tan iyo markii la sharciyeeyay xashiishadda caafimaad. Ganacsatada iyo beeralleyda labadaba waxay hadda si xor ah u socodsiiyaan meheradahooda, iyadoo aan laga baqin inay carqaladeeyaan masuuliyiinta. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka la joogo jawi ganacsi oo caafimaad qaba, cannabis wali waa dawo muran badan leh. Sharciga mamnuucaya isticmaalka xashiishadda caafimaad wali ma laha qaab-dhismeed cad, iyo uqeybinta ganacsiyada ka ganacsata xashiishadda wali waa arin weyn.
Waxa jira dhibaatooyin badan oo xagga sharciga ah oo ku saabsan awoodda akhlaaqda ee lagu beero laguna ganacsado xashiishadda aagagga la deggan yahay. Maaha wax la yaab leh in ay kor u kaceen arrimaha guryaha xashiishka. Isfaham la'aanta ka dhex jirta maamulka hantida ganacsatada xashiishadda ayaa horseeday lacag luminta dacwadaha iyo carqaladeynta ganacsiyada badan.
Haddii aad tahay ganacsade xashiishad, oo laguula arko khilaaf dhexdooda, waxaad u baahan tahay inaad hesho qareen difaaca adiga iyo hantidaada. Maaddaama arrimaha maguurtada cannabis ay u baahan tahay wax ka badan celceliska aqoonta sharciga, waa inaad shaqaaleysiisaa khabiir la macaamilay dhismaha guryaha, iyo sidoo kale kiisaska la xiriira xashiishadda.
Ma haysaa wax su’aal ah?
Ka Qaybgal arrimaha Cannabis Real Estate arrimaha ugu wanaagsan Garyaqaan Peoria, Illinois.
Ganacsiga xashiishadda ee Peoria, Illinois, ayaa kobcaya. Si kastaba ha noqotee, arrimaha ku saabsan sharci ahaanta iyo damiirka beeraha iyo ka ganacsiga badeecadaha xashiishadda ayaa wali kor u sii kacaya. Haddii aad deggan tahay Peoria, nala soo xiriir si aan kaaga caawino la tacaalida arrimaha xashiishadda guryaha. Adeegyadayada waxaa ka mid ah:
Waxaan kaa caawin doonnaa inaan xafidno hantidaada iyo hantidaada
Inta badan dadku badanaa waxay lumiyaan hantidooda ganacsi, jireed, iyo caqli ahaanba xaaladaha la xiriira ganacsiga xashiishadda. Haddii maamulkaaga dhismaha uu kiiskaaga lid ku ah ganacsigaaga, waxaan u joognaa inaan caawinno. Waxaan hubin doonnaa in qayb kasta oo hantidaada ah lagu keydiyayo dhageysiga oo dhan. Xaq ayaad u yeelan doontaa xuquuqda lahaanshaha hantidaada iyo hantidaada dhacdo kasta.
Waxaan ilaalin doonnaa xuquuqahaaga si aad uga ganacsato Xashiishka
Ma jirto sabab loo diido in laguu diido xuquuqda aad uga ganacsato xashiishadda. Khasaare kasta oo ku soo kordha ganacsigaaga sabab la xiriira dacwad sharciyeed waa in si buuxda loo magdhabaa. Asal ahaan, arrimaha hantida maguurtada ah waa in lagu xaliyaa iyadoon waxyeelo loo geysan ganacsigaaga. Sidoo kale waa in lagu siiyaa fursad aad ku difaacdo ficiladaada.
Waxaan kaa caawin doonaa inaad la soo baxdo go'aan deg deg ah oo ka soo baxa maxkamadda
Haddii aadan jeclayn inaad ku dhex gasho dagaallo dheer oo maxkamadeed oo ku saabsan khilaafkaaga, qareenadeena khibradda leh ayaa kaa caawin doona inaad xallinta arrimaha maxkamadda ka soo baxdo. Wadaxaajoodka iyo dhexdhexaadinta, dhinacyo badan ayaa awoodi kara inay xal u helaan arrimaha murugsan. Waad badbaadin kartaa ganacsigaaga kumanaan doolar kaliya adigoo ka fogaanaya hanaanka dheer ee howlaha maxkamadda.
Ha gasho heshiis xashiishad xashiishad guryaha ah adigoon qareen ku haysan miiska. Haddii aad isku khilaaftaan, ha imaan maxkamadda keligaa. Xullo qareenka ugu aaminka badan ee Peoria, Illinois si uu kaaga caawiyo maaraynta dacwadaada. Qareenkayaga ugu weyn, Thomas Howard, wuxuu khibrad ballaaran u leeyahay Cannabis iyo kiisaska guryaha. Wuxuu kaa caawin doonaa inaad hesho natiijada ugu fiican kiis kasta oo ku lug leh khilaafaadka guryaha xashiishka.